Kolontsaina sy fomban-drazana Indoneziana | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | kolontsaina, Indonezia, Fitsangatsanganana any Azia
Indonezia ekoatorialy dia manana nosy 17.000 mahery, izay ny lehibe indrindra dia i Sumatra, i Kalimantan na i Java, ity farany no iray amin'ireo manan-danja indrindra amin'ny lafin'ny mponina.
Ity firenena nosy ity dia eo anelanelan'i Azia atsimo atsinanana sy OseaniaAmin'ny maha toeram-pizahana ho an'ireo tantsambo nanao làlam-barotra, nahazo fitaomana ara-kolontsaina maro izy, noho izany dia hahita fahasamihafana lehibe ao isika.
1 Tantara kely
2 Fivavahana any Indonezia
3 Fomba sy fanao
6 Antoko sy fankalazana
Manampy antsika hatrany amin'ny fametrahana ny tenantsika sy ny fahafantarana kely ny fomba amam-panao sy ny kolontsain'ny toerana tsirairay. Ny toe-javatra misy azy no mahatonga azy a toeran'ny varotra aziatika maro, ary ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia avy amin'ny fiaviana malay. Teo ambany fitaoman'ny Holandey izy io, ary tamin'ny taona 1945 dia nanjary tsy miankina amin'ny Netherlands miaraka amin'i Sukarno.
Tamin'ny 1968 dia nosoloina ny an'i Suharto, izay namorona firaisankina bebe kokoa tany Indonezia fa tamin'ny famoretana. Tamin'ny 1998 dia nametra-pialana izy noho ny tsy fahaizan'ny mponina taorian'ny krizy ara-bola aziatika. Nanomboka teo dia nisy ny fifidianana demokratika teto amin'ny firenena. Amin'izao fotoana izao, ny toekareny dia mifototra amin'ny vola azo amin'ny fanondranana solika ary ny entona voajanahary, mpikambana ao amin'ny OPEC, ary koa avy amin'ny fizahan-tany.
Fivavahana any Indonezia
Ny fivavahana tany Indonezia dia tena zava-dehibe amin'ny famaritana ny kolontsaina sy ny fiainana Indoneziana. ny miantoka ny fahalalahana ara-pivavahana ny lalàm-panorenana raha mbola mifototra amin'ny iray amin'ireo ofisialy dimy, dia ny Silamo, ny Katolika, ny Protestantisme, ny Buddhism ary ny Hindoisma.
Amin'izao fotoana izao, maherin'ny 80% ny mponina dia an'ny Silamo. Ireo mpitarika Islamista tany Java tany am-boalohany dia nohajaina ho walis na olomasina, namorona angano manodidina azy ireo, na dia mandrara ny fanompoana masina aza ny finoana Islamista. Ny vehivavy dia tsy voatery manao saron-doha, na dia mihabetsaka aza ny fampiasana azy. Ho fanampin'izany, ny lehilahy dia afaka manambady vehivavy roa, raha toa ka manana ny faneken'ny vehivavy voalohany izy ireo.
Ny Portiogey dia nampiditra ny katolika, na dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza dia nanomboka tsy dia nanana firy intsony izy io. Ny Hindoisma dia atao any Bali, ary Ny Buddhism dia ataon'ny ankamaroan'ny mponina sinoa.
Rehefa mandeha any amin'ny toerana iray isika, dia tsara foana ny mahita ny fanaon'izy ireo sy ny fomba ampiasainy rehefa mifanerasera amin'ny fiaraha-monina mba hisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitra sy ny toe-javatra mahamenatra. Any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe dia misy fiantraikany be any andrefana, na dia any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe aza faritra ambanivohitra, kolontsaina nentin-drazana be lavitra no mbola voatahiry. Ao amin'izy ireo dia misy ny fahazarana sy fitsipika sasany arahin'aina hiaina eo amin'ny fiaraha-monina, ary tena zava-dehibe ny fianakaviana.
Rehefa mandeha any amin'ny toerana imasom-bahoaka ianao izay tsy maintsy anaovanao hetsika ara-dalàna, toy ny taratasy, dia tsara kokoa ny mandeha miaraka amin'ny akanjo mendrika sy manaja ary manaja kokoa. Amin'ny toerana toy ny tempoly na lapa dia tsy maintsy atao izany manarona soroka, ary mazàna dia mila manao batik, shawl manodidina ny andilana.
Tokony horaisina ihany koa izany ho azy ireo ny loha dia ampahany masinaa, izay tsy tokony ho kitikitihana, ka tsy tokony hialantsika na dia ny fihetsika izay maneho fitiavana aza amin'ny fikasihantsika ny loha. Etsy ankilany, tsy maintsy fantatrao fa ny tanana ankavanana no ampiasainy hihinana, ary tokony hampiasaina koa izy io mba hanomezana na handraisana zavatra, ho fanehoana fanajana, satria ny tanana ankavia dia heverina fa natokana ho an'ny maro kokoa fihetsika maloto toy ny fahadiovana. Ny zavatra iray hafa izay hisarika ny saintsika dia ny manala ny kirarony foana izy ireo hiditra ao an-trano, zavatra izay tsy fahita eto. Na izany aza, nilaza izy ireo fa ny Indoneziana dia iray amin'ireo olona mahafinaritra indrindra sy tia fiaraha-monina, ka tsy hanana olana be amin'ny fifandraisana amin'izy ireo izahay.
Ny akanjo koa dia ho zavatra mahaliana izay manitikitika antsika hatramin'ny fotoana voalohany. Na dia ankehitriny aza dia maro ny olona miakanjo ny Mode tandrefana, indrindra ny tanora sy ny faritra an-tanàn-dehibe, mbola misy fomban-drazana lehibe amin'ny akanjo mety amin'ny toetr'andro mafana.
Mitovy ny fiakanjoan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny sarona Amin'ny toerana maro dia lamba mahitsizoro eraky ny valahana io, toy ny famatorantsika ny lamba famaohana rehefa mivoaka avy ao anaty fandroana isika. Tena ahazoana aina ho azy ireo ary afaka mahita lamba misy loko sy lamina samihafa ianao, mitahiry ny tsara indrindra amin'ny fotoana manokana.
Ho fanampin'izay, ny sarong, manasongadina ny kebaya, izay blouse nentim-paharazana ho an'ny vehivavy Indoneziana. Izy io dia blouse lava sy lava vita amin'ny akanjo lava, tsy misy vozon'akanjo ary bokotra eo aloha. Indraindray dia semitransparent izy io, ka ny lamba manarona ny vatany antsoina hoe kemban na corset dia matetika no atao ao ambany.
Amin'ny lehilahy dia afaka mahita koa ianao ny peci, satroka mahazatra, na saron-doha koa. Miankina amin'ny faritra misy antsika izany.
Miovaova arakaraky ny faritra ny fifanakalozan-karena ao Indonezia satria a fifangaroan'ny fitaomana sinoa, eropeana, atsinanana ary karana. Ny vary no tena ilaina indrindra, izay afangaro amin'ny hena na legioma. Zava-dehibe koa ny ronono voanio, akoho na zava-manitra.
Misy lovia maromaro azontsika andramana raha mankany Indonezia isika. Ny Nasi Campur dia vary ampiarahina amin'ny akoho, legioma, soja ary tortilla. Lumpia dia horonana lohataona misy fiantraikany amin'ny sinoa miaraka amin'ny hena, legioma ary paty soja. Kari ayam dia akoho amam-borona miaraka amin'ny legioma, saosy kari, ronono voanio ary vary fotsy masaka. ny Nasi goreng dia lovia mahazatra iray hafa, vary nendasina miaraka amin'ny legioma, akoho, sono ary atody.
Ny karazany ara-poko de Indonezia dia hita taratra ao amin'izy ireo fiestas y fankalazana. Entre Ny fitsangatsanganana ady amin'ny volana febroary sy martsa dia natao tao Sumba fahatsiarovana ny ady ny fandringanana ny tsirairay. Teo anelanelan'ny volana martsa sy aprily ny Taom-baovao Bali tsirairay, mandritra izany, ho an'ny feon'i amponga mampatahotra izany fanahy ratsy, ny sary famantarana ny tempoly.
Fetibe manan-danja iray hafa dia ny festival Bali of Galungan, amin'ny daty miovaova, izay ilazana fa ireo andriamanitra dia midina amin'ny Tierra manatevin-daharana ny fiestas ety an-tany. Ilaina ihany koa ny fanatrehana ny Nosy Larantuka ho an'ny filaharana manandanja an'ny Seminera Paska ary ao Ruteng ho an'ny duels an'ny karavasy tamin'ny volana aogositra. Ankoatr'izay, eo anelanelan'ny Aogositra sy Oktobra ny fanasana amin'ny fandevenana Trojan ao Sulawesi.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Kolontsaina sy fomban-drazana Indoneziana